က်ေနာ့္ကိုုဖမ္းသြားရင္ဗ်ဴးမရၾကမွာဆိုုးလိုု႔ ကိုုယ့္ဟာကိုုယ္ဗ်ဴးျပီး ကိုုယ့္ဟာ့ကိုုေျဖထားတယ္။ - APANNPYAY
Home / ျပည္တြင္းသတင္း / က်ေနာ့္ကိုုဖမ္းသြားရင္ဗ်ဴးမရၾကမွာဆိုုးလိုု႔ ကိုုယ့္ဟာကိုုယ္ဗ်ဴးျပီး ကိုုယ့္ဟာ့ကိုုေျဖထားတယ္။
Apann Pyay 1:41 PM ျပည္တြင္းသတင္း Edit
ေမး။ ။ ခုုတိုုင္တန္းခ်က္ကိုု ရဲတပ္ဖြဲ.ကအမွႈလက္ခံဖြင့္ေပးလိုုက္ျပီလိုု႔သိရတယ္။ အင္တာနက္ေပၚမွာဆိုုရင္ ဦး၀ီရသူကုုိဆဲဆိုုဆန္႔က်င္ေနတဲ့သူေတြအမ်ားၾကီးပဲ၊ ခင္ဗ်ားကိုုက်မွ ေရြးျပီးတိုုင္တန္းတာကို ရဲတပ္ဖြဲ.ကလက္ခံလိုုက္တဲ့ အေျခအေနကိုုေရာဘယ္လိုုသေဘာရလဲ။
ေျဖ။ ။ အကယ္၍က်ေနာ္ဖမ္းခံရရင္ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ဇနီး၊သမီးငယ္နဲ. အေမ့ကိုု က်ေနာ့ကိုု နားလည္ဖိုု႔ေတာင္းပန္ခ်င္ပါတယ္။ အဓမၼ၀ါဒီေတြကိုု တိုုက္ဖ်က္ဖိုု႔ က်ေနာ္တိုု႔ ကိုုယ္တြင္းသႏၱာန္မွာေရာ၊ က်ေနာ္တိုု႔က်င္လည္ေနတဲ့ေနတဲ့ လူ႔ေဘာင္မွာေရာ ဓမၼဖက္ကေနအျမဲထင္ထင္ရွားရွား၊ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ရွိေနဖိုု႔လုုိအပ္လုုိ႔ပါ။
ကျနော့်ကိုုဖမ်းသွားရင်ဗျူးမရကြမှာဆိုုးလိုု့ ကိုုယ့်ဟာကိုုယ်ဗျူးပြီး ကိုုယ့်ဟာ့ကိုုဖြေထားတယ်။
မေး။ ။ ကိုုဆွေဝင်းက ဆရာတော်ဦးဝီရသူကိုု ပါရာဇိကကျသွားပြီလိုု့ Ba Kaung နာမည်နဲ့ ဖေ့ဘွခ်ပေါ်မှာရေးတယ်ဆိုုတာဟုုတ်လား။
ဖြေ။ ။ ဦးကိုုနီသတ်ဖြတ်သူတွေကိုု ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုုပြီး ဦးဝီရသူကထုုတ်ဖော်ရေးသားပြောဆိုုနေတာအားလုုံးအသိပါပဲ။ အာဏာပိုုင်များကလည်း ဒီလိုု ပြည်သူတစ်ရပ်လုုံးချောက်ချား တုုန်လှှုပ်ဖွယ်ရာဇဝတ်မှှုကိုု ထောက်ခံကြောင်းပြောနေတာတွေကိုု လျစ်လျူရှှု အရေးမယူတာအားလုုံးအသိပါပဲ။ ဒီလိုုအခြေအနေမှာ ကျနော်တိုု့က ဒါကိုုသတင်းရေးခဲ့တယ်၊ သတင်းရေးတဲ့နေရာမှာ မန္တလေးကဆရာတော်ဦးစိန္တကိုုမေးမြန်းပြီးသူ့မှတ်ချက်ကိုုတောင်းတဲ့အခါ ဆရာတော်က ဦးဝီရသူရဲ.ပြောဆိုုချက်ဟာ ပါရာဇိကကံမြောက်တယ်ဆိုုပြီးဖြေကြားခဲ့တယ်။ ဒီဖြေကြားချက်ကိုုသတင်းထဲမှာထည့်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ဒီသတင်းကိုု ကျနော့်ရဲ. ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာတင်တဲ့အခါ ဦးဝီရသူ ပါရာဇိကကျပြီဖြစ်ကြောင်းသိရဆိုုပြီး ရေးသားခဲ့တယ်။ ကျနော့်ရဲ.သတင်းရင်းမြစ်ပြောဆိုုချက်ကိုု ကိုုးကားပြီးဖေ့ဘွတ်ပေါ်ပြန်ရေးတာကိုု အမှှုဖွင့်တဲ့အနေအထားပါ။ ဘယ်လိုုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကတော့ ကျနော်က ၁၀၀ ရာခိုုင်နှှုန်းအပြည့်အဝတာဝန်ခံပါတယ်။
မေး။ ။ အာဏာပိုုင်တွေကရော လာရောက်အကြောင်းကြားပြီလား။
ဖြေ။ ။ ခုုမတ်လ ၈ ရက်မနက်စောစောထိတော့ တရားဝင်ဘာမှအကြောင်းကြားတာမရှိဘူး။ ကျနော်တိုု့ကတော့ မြတ်စွာဘုုရားရဲ. သင်္ကန်းရေခြုံပြီး ဒုုစရိုုက်မှှုတွေကျူးလွန်နေသူ၊ ရာဇဝတ်မှှုကိုု အားပေးအားမြှောက်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုု ဘာမှတောင်းပန်စရာ၊ ညှိနှှိုင်းစရာမရှိဘူး။ ရဲကလာခေါ်လိုု့ကတော့ လိုုက်သွားဖိုု့အသင့်ပဲ။
မေး။ ။ ခုုတိုုင်တန်းချက်ကိုု ရဲတပ်ဖွဲ.ကအမှှုလက်ခံဖွင့်ပေးလိုုက်ပြီလိုု့သိရတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာဆိုုရင် ဦးဝီရသူကုုိဆဲဆိုုဆန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ၊ ခင်ဗျားကိုုကျမှ ရွေးပြီးတိုုင်တန်းတာကို ရဲတပ်ဖွဲ.ကလက်ခံလိုုက်တဲ့ အခြေအနေကိုုရောဘယ်လိုုသဘောရလဲ။
ဖြေ။ ။ အားလုုံးသိတဲ့အတိုုင်းပဲ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ လင်းဇော်ထွန်း၊ ဇေယျဖြိုးတိုု့ဟာ မဘသဥက္ကဌဆရာတော်ကိုု သွားရောက်တွေ.ဆုုံတာတွေရှိခဲ့တယ်၊ ဒီအခြေအနေပေါ်မှာ ဆရာ၊ ဒကာဆိုုတဲ့ဆက်ဆံရေးအကြောင်းခံပြီး မဘသက ဦးကိုုနီအမှှုကိစ္စမှာ ဒီလူတွေအပေါ်တစ်စုုံတစ်ရာလွှမ်းမိုုးမှှုရှိသလားဆိုုတာကိုုမေးမြန်းခဲ့တယ်။ ဒါကိုု မဘသတွေက မကျေနပ်ကြဘူး၊ တစ်ဖက်မှာလည်း ဦးကိုုနီအမှှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အာဏာပိုုင်တွေရဲ. ကိုုင်တွယ်ပုုံ၊ သတင်းထုုတ်ပြန်ပုုံကိုုကျနော့်ဖက်က ဝေဖန်မှှုတွေရှိတယ်။ ဆိုုတော့ ဒီအခြေအနေတွေပေါင်းစုုပြီး ကျနော့်ကိုုအမှှုဖွင့်ဖိုု့အကြောင်းဖန်လာတယ်လိုု့ယူဆပါတယ်။ ဘယ်လိုုပဲဖြစ်ဖြစ် ရာဇဝတ်မှှုတစ်ခုုကိုု ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းထောက်ခံနေသူတွေကိုု ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးမယူဘဲ မဆီမဆိုုင်ကျနော့ကိုုလာအရေးယူမယ်ဆိုုရင်တော့ ဒီတုုိင်းပြည်မှာ တရားဥပဒေစိုုးမိုုးရေးနဲ.ပတ်သက်လာရင် အာဏာပိုုင်တွေရဲ.နည်းလမ်းမကျတဲ့ မူဝါဒတွေဘယ်လောက်အတိုုင်းအတာထိဆက်ဖြစ်နေသလဲဆိုုတာ ပေါ်လွင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ကိုုဆွေဝင်းကိုု ဦးကိုုနီအမှှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆဲဆိုုခြိမ်းခြောက်တာတွေရှိတယ်။ ဒါတွေကိုုရော ကိုုဆွေဝင်းက အာဏာပိုုင်တွေကိုု အကြောင်းကြားတာရှိလား။ ကုုလားသတင်းထောက်ဘာညာဆိုုပြီး ဆဲဆိုုနေကြတာ။
ဖြေ။ ။ အာဏာပိုုင်တွေလည်းအားလုုံးသိနေကြားနေတာပဲ။ ဥပဒေစိုုးမိုုးရေးအတွက် ပါးစပ်ကသာပြောပြီး လက်တွေ.မလုုပ်တဲ့ဒီလူတွေကိုု ကျနော့်အနေနဲ့ ဘာမှအကြောင်းကြား အကူအညီတောင်းစရာမရှိပါဘူး။ ကုုလားသတင်းထောက်ဘာညာကတော့ ကျနော်ဂရုုမစိုုက်ပါဘူး။ ရခိုုင်ပြည်နယ်အရေး၊ မိတ္ထီလာအရေးအခင်းတွေ ကျနော်သတင်းရေးတုုန်းက ကျနော့်ကိုုကုုလားသတင်းထောက်ဆိုုပြီးစွပ်စွဲတာတွေကြုံခဲ့ရတယ်။ အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုုင်ကိစ္စရေးတော့ ဆိုင်ရှင်တွေကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မိုု့လိုု့ အစွန်းရောက်ရခိုုင်ဘာညာဆိုုပြီး အချို.ကဆဲဆိုုတာခံခဲ့ရတယ်။ ခုုဦးကိုုနီကိစ္စလည်း ကျနော့်ကိုု ကုုလားသတင်းထောက်ဆိုုပြီးထပ်ဆဲကြတယ်။ ဆဲချင်ဆဲကြပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တိုု့ကတော့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုု လူမျိုးစွဲ၊ ဘာသာစွဲ၊ နယ်နမိတ်စွဲမရှိဘဲ အမှန်ကိုုအမှန်အတိုုင်းရေးဖိုု့က ကျနော်တိုု့တာဝန်ပဲ။ ကျနော်တိုု့သတိထားတာက ကိုုယ်ရေးတာက မှန်ကန်တိကျဖိုု့၊ ဓမ္မနည်းလမ်းကျဖိုု့၊ လောကလူသားအချင်းချင်းထားရမယ့် လောကပါလတရားတွေကိုုအထောက်အကူပြုဖိုု့၊ လူကိုုလူလိုုမြင်ပြီး၊ လူကိုုလူလိုုစာနာဖိုု့ပဲ။
မေး။ ။ တစ်ခြားဘာများဖြည့်စွက်ပြောဆိုုစရာရှိလဲ။
ဖြေ။ ။ အကယ်၍ကျနော်ဖမ်းခံရရင် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ဇနီး၊သမီးငယ်နဲ. အမေ့ကိုု ကျနော့ကိုု နားလည်ဖိုု့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ အဓမ္မဝါဒီတွေကိုု တိုုက်ဖျက်ဖိုု့ ကျနော်တိုု့ ကိုုယ်တွင်းသန္တာန်မှာရော၊ ကျနော်တိုု့ကျင်လည်နေတဲ့နေတဲ့ လူ့ဘောင်မှာရော ဓမ္မဖက်ကနေအမြဲထင်ထင်ရှားရှား၊ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ရှိနေဖိုု့လုုိအပ်လုုိ့ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈ နှစ် ကျနော်အသက် ၂၀ အရွယ်မှာကျနော့်ကိုု ထောက်လှမ်းရေးတွေလာဖမ်းပြီး နိုုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာစေမှှုကိုု ပျက်ပြားစေတဲ့ဆိုုတဲ့စွဲချက်နဲ့ ထောင် ၂၁ နဲ့ချခဲ့တယ်။ အဲဒီတုုန်းကလည်း ကျနော်ဘယ်ကိုုမှထွက်ပြေးခဲ့တာမဟုုတ်ဘူး။ ခုုလည်းထွက်ပြေးမှာမဟုုတ်ဘူး။ အဓမ္မဝါဒီတွေကိုုရင်ဆိုုင်ဖိုု့အသင့်ပါပဲ။